အိန္ဒိယကီမိုနိုဟာအခုအချိန်မှာဝက်ဘ်ပေါ်မှာအရမ်းကိုရေပန်းစားနေပါတယ်။ အားလုံးအဓိကလိင်ပြွန်အပျော်တမ်းအိန္ဒိယညစ်ညမ်းပါဝင်ပြီးနှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်များအတွက်အရူးဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တပ်မက်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတွေအများကြီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရည်းစား၏ပိုးပန်းစီးနေကြသူအိန္ဒိယကနေဒီဆယ်ကျော်သက်ကလေးစောင့်ကြည့်ဖို့ချစ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်း၏ပိုးပန်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ယောက်ျားလေးကစားစရာများ၏ငယ်ရွယ်အန်စာတုံးချစ်သောသူကျိန်းဝပ်နှင့်အတူအချို့သောပျော့အရေးယူလိုအပ်သည့်အခါဟော်နီပူလူငယ်။ ပြီးတော့ကမ္ဘာကအိန္ဒိယလိင်စွန့်စားသူများအတွက်အရူးဖြစ်သောကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။, မသာကြောင်း,ဒါပေမယ့်ဒီနယ်ပယ်၌အကြှနျုပျတို့၏ဂိမ်းများချပြီးနေသောအိန္ဒိယဂိမ်းဖန်တီးသူလျှင်စာရေးရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးအိန္ဒိယလိင်ဂိမ်းတွေစုဆောင်းရာမှာဒီအရှေ့တိုင်းသားအားလုံးကိုစုစည်းထားတာကသင့်ကိုစိတ်ကြွစေတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အပြင်၊ပြန်ဖြစ်လာဖို့အကြောင်းတွေအများကြီးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့ပျော်ရွင်မှုကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောဂိမ်းအားလုံးသည်သင့်အားအခမဲ့လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အားမေးဘယ်တော့မှနှင့်သင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရုံသင်တို့သည်လည်းသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်အိန္ဒိယစိတ်ကူးယဉ်ပျော်မွေ့သောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားကစားသမားနှင့်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်ဝေမျှကြကုန်အံ့လိမ့်မည်ဟုအများအပြားအပြန်အလှန်အင်္ဂါရပ်များကမ်းလှမ်းတဲ့ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆိုက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ထူးခြားသောစုဆောင်းခြင်းမှပွင့်လင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရ။, ကျနော်တို့မှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအိန္ဒိယညစ်ညမ်းပရိသတ်များနှင့်ယောက်ျားတွေနှစ်ဦးစလုံးဂိမ်းနှင့်သူတို့အစစ်အမှန်အသက်တာ၌အိန္ဒိယသားငယ်များနှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်ပင်အတွေ့အကြုံများအကြောင်းသူတို့၏အကြံအစည်ဝေမျှကြသည်ဘယ်မှာဖိုရမ်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ဂိမ်းအများစုကိုတကယ်အိန္ဒိယတီထွင်သူများကဒီဇိုင်းဆွဲပြီးသူတို့၏နိုင်ငံများတွင်ကျော်ရှိသည်သားငယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ကူးယဉ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုနှစ်သက်စေရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ သင်လိုချင်သည့်သို့သော်သင်သည်အိန္ဒိယသားငယ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိုက်ပါစေလိမ့်မည်သည့်လိင်,အမျိုးအစားကနေဂိမ်းတွေအများကြီးရ။ သင်သည်သူတို့၏ပွဲကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးအဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်နိုင်,အတွင်းခံနှင့်ပူမတ်မတ်အများကြီးတက်ဆင်မြန်း,ဒါပေမယ့်လည်းသင်ကသူတို့ကိုစိုကျစိုကျအတွက်တက်ဝတ်စားဆင်ယင်ရလိမ့်မယ်., လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ခြင်းကလည်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအပူဆုံးလိင်အတွေ့အကြုံအချို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်၎င်းတို့၏တွင်းကိုထိုးဖောက်နိုင်လိမ့်မည်,သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ငပဲကိုကိုးကွယ်သို့မဟုတ်ရက်စက်စွာသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေရန်,သင်တို့ရှိသမျှသည်သူတို့၏အလောင်းတွေအပေါ်မှာလွှမ်းမိုး,ဤဂိမ်းအကြောင်းကိုငါ့အအကြိုက်ဆုံးအရာဖြစ်အံ့သောငှါ,ငါသည်သူတို့၏မှောင်မိုက်အသားအရေအပေါ်ကြည့်ရှုပုံကိုချစ်သကဲ့သို့.
သို့သော်ငါတို့သည်လည်းအချို့သောစိတ်ကူးယဉ်ကမ်ဘာပျေါတှငျရှိသည်။ အိန္ဒိယမှာကျော်ယောက်ျားတွေကျိကျိအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကစားချစ်ကြတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအရူးလိင်အမျိုးမျိုးရှိခြင်း,သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ရူပါရုံကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်ဂိမ်းများကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ သင်ပင်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းထဲမှာကဲ့သို့ကျော်ကြားနေသောဘောလီးဝုဒ်ကနေအပူဆုံးသောသူငယ်နှင့်အတူဆိုက်အပေါ်အချို့သောရုပ်ပြောင်ဂိမ်းကြယ်ပွင့်စစ်ပွဲများ,ဂိမ်းသို့မဟုတ်သေစားသေစေသောကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များမှဤအရပ်၌ကျော်သောသူငယ်အဖြစ်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောင်လန်လိင်ဂိမ်းစုဆောင်းမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အခမဲ့ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အများဆုံးသောညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားအပေါ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်တော့မှကျနော်တို့စာဝှက်ထားတဲ့ဆာဗာများရှိသည်,ပင်ထွက်အဖွဲ့ကသင့်ရဲ့အိုင်ပီလိပ်စာသိနိုင်အောင်. ငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်သမျှသောအင်္ဂါရပ်တွေကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ပလက်ဖောင်းရှိသည်။ သငျသညျစက္ကန့်အတွင်းကစားချင်ဂိမ်းမျိုးကိုရှာဖွေကူညီပေးမည့်ကိရိယာများရှိပါသည်,ဂိမ်းသင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်လာသူတို့သင်ပိုင်ဆိုင်စေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်., ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းကစားနှင့်သင်အိန္ဒိယအတွက်နီခံစားရအခါတိုင်းပိုပြီးအဘို့ပြန်လာ။